Ankalazana ny fizahantany manerantany anio koa ny Andro moka maneran-tany
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao momba ny fahasalamana » Ankalazana ny fizahantany manerantany anio koa ny Andro moka maneran-tany
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • fanabeazana • Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Vaovao Mafana India • Vaovao • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny
Raha nanontaniana raha manana fiatraikany ratsy amin'ireo mpizahatany afrikanina tatsimo ny tazomoka, ny 60% amin'ireo mpandray anjara izay nitafatafa tamina vanim-potoana tazomoka vao haingana dia nanaiky izany fanontaniana izany, izay nanondro fa misy fiatraikany ratsy eo amin'ny isan'ny mpizahatany mitsidika ny faritra ny tazomoka. , Ny 20 aogositra dia voamarina ho Andro manerantany ho an'ny moka mba hampahafantatra momba ny aretina sy ny aretina ateraky ny moka.
Andro zoma 20 aogositra no andro maneran-tany momba ny moka, antony iray hahatsiarovan'ny indostrian'ny fizahan-tany sy fizahan-tany manerantany ny fitohizan'ity tolona ity.
Ity andro ity dia natao hanentanana ny olona hanaiky ny fandrahonana ateraky ny aretina ateraky ny moka toy ny tazo sy tazo dengue.
Ny olona dia tokony handray fepetra fisorohana mba hiarovana amin'ny loza ateraky ny moka teraka na aiza na aiza eto amin'izao tontolo izao.
Isan-taona amin'ny Andro manerantany amin'ny moka, izao tontolo izao dia mahatsiaro ny fahitana fa ny moka Anopheles vavy dia ny vector izay mamindra ny tazomoka eo amin'ny olombelona. Ity fikarohana lehibe ity, nataon'i Sir Ronald Ross tamin'ny 1897, dia nanjary fototry ny programa fanaraha-maso malaria maro ao anatin'izany ny Indoor Residual Spraying and Insecticide Treated Nets ary koa ny fivoaran'ny fanafody fitsaboana tazomoka sy ny chemoprophylaxis.
Ny fankalazana dia ny nanovan'ny fahitana an'io ny fizotry ny tantaran'ny fitsaboana.
Na dia olona an-tapitrisany maro aza no voavonjy vokatr'ity fikarohana tokana ity, dia mbola mametraka vesatra mavesatra amin'ireo firenena voan'ny tazo ihany ny tazomoka, ary tombanana ho 409,000 no maty vokatr'io aretina io manerantany tamin'ny taona 2019 fotsiny.
Tamin'ny 2014 tsy azo tsaboina virus mitondra ny moka izany fizahan-tany mandrahona tany Karaiba dia tsikaritra tany Karaiba ary niteraka loza mitatao ho an'ny fizahantany.
Androany, ny mpikaroka sy ny mpahay siansa kendrena amin'ny malaria eran'izao tontolo izao dia manohy mandalina ny moka mitondra tazomoka amin'ny fiezahana hijanona mialoha ny katsentsitra mivoatra hatrany ary hahita fomba vaovao sy tsara kokoa hiadiana amin'ny aretina.
Ny vaovao amin'ny Andro manerantany amin'ny moka dia avy amin'ny firenena iray izay ahitan'ny mosquito tena loza mitatao ho an'ny fahasalamana sy fiarovana any India.
Momba ny Andro manerantany amin'ny moka dia miparitaka amin'ny alàlan'ny media sosialy momba ny filàna fiarovana azy amin'ny moka.
Miaraka amin'ny marika misy ny hoe 'Kill Pests, Kill Diseases', orinasam-Pihanaka Indiana dia manome toky fa tsy hanana aretina rehetra any an-trano.
Ny orinasa dia mitantana programa fampahafantarana ny mpanjifa miaraka amin'ny fiaraha-miasa amin'ireo fantsom-baovao.
Tamin'ny alàlan'ny programa EMBED (Elimination of Mosquito Borne Endemic Diseases), GCPL dia nanao dingana tsara amin'ny fisorohana ny tazomoka eo amin'ny sehatry ny ahitra.
Tamin'ny 2015, natomboka tao Madhya Pradesh ny programa niaraka tamin'ny minisiteran'ny Fahasalamana sy ny fiahiana ara-pianakaviana mba hanafoanana ny tazomoka amin'ny tanàna be olona.
Ny programa dia nandrakotra tanàna maherin'ny 800 any amin'ny distrika 11 any Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, ary Chhattisgarh. Niara-niasa tamin'ny mpiray antoka ny GCPL mba hampandeha fandaharan'asa fanovana fihetsika mahery vaika any amin'ny faritra misy index parasite avo isan-taona izay ny loza mitatao amin'ny tazomoka no avo indrindra.
Izany dia nahatonga 24% amin'ireo fokontany mpanelanelana 824 nitatitra tranga 0 momba ny tazomoka tamin'ny faran'ny FY20-21.
Ny tanàna sisa tavela dia niditra an-tsehatra tamin'ny taona 1 ary ny tanjona dia ny hahatonga azy ireo tsy misy tazomoka amin'ny taona 2 sy taona 3.
Ankoatr'izay, ny GCPL dia nanitatra ny portfolio amin'ny fifehezana dengue sy fitantanana any amin'ny tanàna 4 (Bhopal, Gwalior, Lucknow, ary Kanpur) ary manome fanampiana ara-teknika ho an'ny National Vector Borne Disease Disease Program (NVBDCP) eo ambanin'ny Ministeran'ny Fahasalamana sy ny Fianakaviana GOI Fiaraha-miasa.
Ny fanehoan-kevitra tamin'io fotoana io, Sunil Kataria CEO, hoy izy, “Ao amin'ny GCPL, ny ezaka ataonay dia ny hahatonga an'i India ho salama, ho voaro, ary afaka amin'ny aretina ateraky ny vector. Hatramin'ny valanaretina COVID-19 dia nanjary zava-dehibe kokoa ny fiambenana noho ny fandrahonana indroa amin'ny aretina ateraky ny moka sy ny viriosy. Amin'ny Andro manerantany amin'ny moka dia manentana ny tsirairay izahay mba handray fepetra hisorohana ny tazomoka na dengue.
Izahay dia manolo-tena hitarika hetsika tahaka izany izay hahafahan'ny olona manana fahatsiarovan-tena ilaina sy vahaolana hiadiana amin'ny fandrahonan'ny moka.
Ny System Management Information Information System (HMIS), tabilao iray an'ny Mission National Health Mission (NHM), dia nitatitra tranga mararin'ny tazo malaria sy dengue an'arivony maro tany India teo anelanelan'ny aprily 2020 ka hatramin'ny martsa 2021.
Ankoatra ny fiatraikany ara-pahasalamana, ny vesatra ara-tsosialy sy ara-toekarena na fandaniana isan-taona ao amin'ny firenena noho ny tazomoka sy dengue dia avo kokoa.
Mahafantatra ireo ahiahy ireo ny GCPL amin'ny alàlan'ny fandraisana andraikitra ara-tsosialy sy ireo vokatra manavao ny zava-bita izay mikendry ny hanosika ny fiovan'ny fitondran-tena hiaro ny tenany amin'ireo aretina ateraky ny moka.
Adv. Jayant Deshpande, sekretera manam-boninahitra, Fikambanan'ny bibikely an-trano (HICA) - vondron'orinasa misahana ny famonoana bibikely ao an-tokantrano, hoy izy, "Mba hiatrehana ny loza ateraky ny moka, dia tsy maintsy mampiasa vahaolana sahaza sy matoky tena fotsiny ny olona.
Tondraky ny vokatra sandoka ny tsena toy ny hazo ditin-kazo manitra famonoana moka tsy ara-dalàna sy tsy misy marika misy akora manimba.
Ireo vokatra avy amin'ny mpilalao tsy mahay mandanjalanja ireo dia mety ho mora vidy kokoa nefa tsy mandeha amin'ny fizotry ny famokarana voafehy sy ny fanaraha-maso ifotony ny masonkarenan'ny fiarovana ny hoditra, ny maso ary ny taovam-pisefoana nomena ny vokatra famonoana bibikely rehetra ao an-trano.
Ny hazo ditin-kazo manitra famonoana moka tsy ara-dalàna rehetra dia mangeja fenitra ary tsy voasedra amin'ireo masontsivana voalaza etsy ambony. Ny fampiasana ireo hazo ditin-kazo manitra famonoana moka tsy ara-dalàna ireo dia mampidi-doza indrindra amin'ny fahasalaman'ny olom-pirenena amin'ny sokajin-taona rehetra. Mamporisika mafy ny rehetra izahay mba tsy hampiasa afa-tsy ny volavola sy ny vokatra eken'ny governemanta. ”
Dr. Myriam Sidibe, manam-pahaizana momba ny fahasalamana manerantany ary profesora malaza amin'ny fanazarana ao amin'ny London School of Hygiene and Tropical Medicine, hoy izy, "Nahavita asa tsara i India tamin'ny famongorana ireo tranganà tazo sy dengue tato anatin'ny 5 taona lasa. Rehefa manitsy ny fiainantsika isika rehetra hisorohana ny COVID-19, dia tokony hitohy ny ezaka hampihena bebe kokoa ny fiantraikan'ny aretina ateraky ny moka.
Mety hiantso tanana eny ambony lampihazo ny governemanta hamaha ny areti-mifindra COVID-19, saingy tsy mila mijanona ny fampielezan-kevitra lava ataonay amin'ny moka. Ny fiaraha-miombon'antoka amin'ny fanjakana sy ny tsy miankina dia manakiana ny fampidinana ny vesatra ara-tsosialy sy ara-toekarena any India noho ny tazomoka, dengue, ary aretina hafa toy izany.
Ireo fiaraha-miasa ireo dia mety hiteraka fanavaozana sy modely mahaliana maro hisorohana ny fihanaky ny aretina atin'ny moka. ”
Cuthbert Ncube avy amin'ny Boar ny fizahantany afrikaninad mampatsiahy ireo aretina ateraky ny moka izao tontolo izao mba hijanona ho loza mitatao amin'ny indostrian'ny fizahan-tany sy fizahantany manokana any Afrika, ary tsy tokony hadino ny olona iray rehefa mandalo ny krizy COVID-19.